Hoax » စိတ်မပူပါနဲ့ ဦးရဲထွဋ် – She is so strong and unbreakable	12
9 June 2014 Last updated at 09:30 A deputy minister in the Burmese government has had to apologise after his wife spreadafake image of pro-democracy campaigner Aung San Suu Kyi wearing an Islamic headscarf.
Because she is so strong and unbreakable. (အင်္ဂလိပ်သီချင်းတစ်ပုဒ်က စာသား ကူးယူထားပါသည်)
အရီးခင် says: ရွာထဲက လူတွေ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။
black chaw says: ဘယ့်နှယ့် ကွန်းမန့် ပိတ်ခိုင်းနေရတာတုန်း အစ်မတော်ရယ်…။
ကေဇီ says: ၂၅/၂၆ နှစ်လုံးလုံးးးး
ကထူးဆန်း says: အရီး .. ဒါက သူ့စာမျက်နှာ က .. Ye Htut
ကေဇီ says: ဖဘမှာ သူ့လောက် မျက်နှာပြောင်တဲ့သူကို မမြင်ဖူးဘူးးးးး
မတောင်းပန်တတ်တဲ့ တောင်းပန်ရကောင်းမှန်းမသိတဲ့ သူတွေကြားမှာ ပြန်တောင်းပန်တာကို မဆိုးဖူးပြောရမားးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14445
kai says: ဒီအဖြစ်တခုလုံးဖတ်ကြည့်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ…
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့.. ရုံးအနေနဲ့.. “apology accepted” လို့ပြောသင့်တယ်ထင်ပါကြောင်း…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ပြောတုန်းက လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးနဲ့ ဆန့်ကျင်နိုင်တယ်။ ကန့်ကွက်နိုင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဆင့်မြင့်မြင့် လုပ်ကြပါလို့ ပြောသွားတယ်။
“apology accepted” လည်း ပြောဖို့ လိုမယ်မထင်ဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14445
kai says: ဒီလို.. အမတော်ရဲ့..။
ရွေးကောက်ပွဲအတွက်… နိုင်ငံရေး.. အားပြိုင်မှုပြိုင်ပွဲ.. မဲဆွယ်မှုစနေပြီဖြစ်ပါကြောင်းရယ်လို့သာ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9261
ဦးကြောင်ကြီး says: ဦးမာမွတ်.. ခီများ သောက်ပဇပ် ပိတ်ထားစမ်း.. (ရေသောက်တာ ပြောဒါနော်)
Was this answer helpful?LikeDislike 12152
alinsett (gazette) says: မှတ်ချက်မပေးနဲ့ ဆိုလို့ ..
Iris says: မမှန်​ကန်​တဲ့သတင်းကို ဒီလိုအဆင့်​မြင့်​ဝန်​ထမ်း ၀န်​ကျင်း က မစဉ်းစားပဲ ရှယ်​တယ်​ဆိုတာ ​တော်​​တော်​လွန်​လှပြီ။ သူတို့ကို ဘယ်​လိုလုပ်​ယုံကြည်​လို့ရမလဲ။ မြန်​မာ့ ပတ်​၀န်းကျင်​​မှာ ​တောင်းပန်​တယ်​ဆိုတာ ဟန်​ပြ လုပ်​ရပ်​ပါ။ ပြီးရင်​ ထပ်​လုပ်​ဦးမှာပဲ။ သူ့​တောင်းပန်​ထားတာက သူတို့ကပဲ အမှား မလုပ်​သလိုကြီး။ သူတို့ကိုမုန်းတဲ့သူတိုင်းကို ဘာလို့ NLD ဘက်​​တော်​သားချည်းပဲလို့ထင်​တာလဲ။
Mr. MarGa says: ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီးတော့ ဦးရဲထွဋ် မဟေသီအကြောင်းများ ပြောတာလား လို့